Luca Toni oo Pep Guardiola kula taliyey inuu tababare u noqdo Bayern Munich (Aqriso) - Caasimada Online
Home Warar Luca Toni oo Pep Guardiola kula taliyey inuu tababare u noqdo Bayern...
Luca Toni oo Pep Guardiola kula taliyey inuu tababare u noqdo Bayern Munich (Aqriso)
Luca Toni ayaa daaha ka qaaday inuu Pep Guardiola doonayo inuu mustaqbalka leyliyo Bayern Munich, wuxuuna ninka reer Talyaani ugu baaqay tababarihii hore ee Barcelona inuusan ka daahin kooxah ka dhisan Germany.
Weeraryahanka kooxda Fiorentina ayaa wax badan lasoo ciyaaray tababarihii hore ee Blaugrana waxayna labadoodu soo wada jirteen maaliyada Brescia, Guardiola oo dhamaadkii xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ka tegay Barcelona ayaa ku jira wadadiisa uu ku raadsanaayo koox kale.
Weeraryahankii hore ee xulka Italy ayaa u sheegay majalada Bild: “Wuxuu wax iga weydiiyey Bayern. Waxaan u maleynayaa falsafad ahaan waaba kooxda uu jecelyahay.
“Waa tababare wanaagsan, kaasoo kooxda u noqon kara leyliye dhab ah. Wuxuu ka heytaa kubada Jarmalka xaqiiqooyin fiican.”